गर्भवती महिलामा कोरोना संक्रमणको कति जोखिम ? – Sudarshan Khabar
गर्भवती महिलामा कोरोना संक्रमणको कति जोखिम ?
अमेरिकन कलेज अफ अब्स्ट्रेसियन्स् एन्ड गाइनोकोलोजिस्टको एक अनुसन्धानअनुसार हालसम्मको तथ्यांकले गर्भवतीहरू कोभिडको उच्च जोखिममा छैनन् । तर श्वासप्रश्वासको संक्रमणले उनीहरूको स्वास्थ्यमा बाधा पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।
काठमाडौँ — सामान्य अवस्थामा भन्दा गर्भावस्थामा स्वास्थ्यको धेरै ख्याल राख्नुपर्छ । गर्भवतीमा विभिन्न जोखिम आउन सक्छन् । आफ्नो र बच्चा दुवैको ख्याल राख्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । भर्खर सुत्केरी भएका र नवजात शिशुलाई ख्याल राख्न झन् बढी स्याहार चाहिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संंगठनले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई महामारी घोषणा गरिसकेको छ। संसारभर फैलिएको यो रोगले हालसम्म ३० हजारभन्दा बढीको ज्यान लिइसककेको छ।
धेरै जना गर्भवती अहिले आराममा हुनुहुन्छ होला, कसैको डेलिभरी डेट पनि नजिकिँदै होला। हालसम्म गर्भवती तथा नवजात शिशुमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएको छैन तर चिकित्सकहरूले जोखिममा पर्नसक्ने समूहमा राखेका छन्।
जनवरी ३० मा उत्तरपूर्वी हेइलोङजियाङ प्रान्तको राजधानी हार्बिनमा कोरोना संक्रमित महिलाले स्वस्थ शिशु जन्माएकी थिइन्। शिशुलाई दुईपटक कोरोना टेस्ट गर्दा पनि देखिएन। आमालाई संक्रमण देखिनेबित्तिकै चिकित्सकहरूले उपचारका साथै मनोवैज्ञानिक परामर्श पनि दिएका थिए।
जामा पेडियाट्रिक्स जर्नलले कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएका चीनका ३३ गर्भवतीमा अध्ययन गरेको थियो। तीमध्ये तीन जनाको नवजात शिशुमा कोरोना पोजिटिभ पाइएको थियो तर ती शिशुहरू निको भएका थिए।
अहिलेसम्मका विभिन्न अध्ययनमा पनि कोरोना भाइरसको जोखिम शिशु तथा बालबालिकामा कम देखिएको छ। तथापि उक्त अध्ययनले गर्भवतीहरू जोखिममा पर्ने/नपर्ने यकिन नभएको बताएको छ।
कोरोना भाइरसबाट गर्भवती महिलालाई के–के जोखिम हुन्छ?
अमेरिकन कलेज अफ अब्स्ट्रेसियन्स् एन्ड गाइनोकोलोजिस्टको एक अनुसन्धानअनुसार हालसम्मको तथ्यांकले गर्भवतीहरू कोभिडको उच्च जोखिममा छैनन्। तर श्वासप्रश्वासको संक्रमणले उनीहरूको स्वास्थ्यमा बाधा पुग्ने सम्भावना रहने अध्ययनहरूमा उल्लेख छ। गर्भावस्थाका बेलामा शरीरमा विभिन्न परिवर्तन हुने हुँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ, त्यसैले संक्रमण हुन सक्छ। कोभिडकै कारणले गर्भपात हुने सम्भावना नदेखिए पनि अरु बिरामीका कारण भने त्यो सम्भावना रहन सक्छ।
सन् २००२–२००३ को महामारीका बेला भाइरस लागेका र सिकिस्त अवस्थामा रहेका केही महिलामा गर्भपातको उच्च जोखिम देखिएको थियो। गर्भावस्थामा श्वासप्रश्वासको भाइरल संक्रमणले कम तौल भएको शिशु तथा समय नपुग्दै बच्चा जन्मिनसक्ने हुन्छन्। साथै उच्च ज्वरोले केही समस्या गराउन सक्छ।
प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. मनोर दिन सैयद भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा महिलामा प्रतिरक्षा प्रणाली अरुभन्दा कमजोर रहने गर्छ, उनीहरूलाई सर्नसक्ने सम्भावना भए तापनि धेरै तनाव लिनुहुन्न। तनावले बरु जोखिम निम्त्याउन सक्छ।’
के आमाको पेटमा रहेको शिशुलाई संक्रमण सर्छ?
विभिन्न अध्ययनका अनुसार आमाबाट पेटमा रहेको शिशुलाई कोरोना भाइरस नसरेको पाइएको छ। बरु बच्चा जन्मेपछि कोरोना संक्रमित व्यक्तिसँगको सम्पर्कमा रहँदा सरेको भेटिएको छ।
भर्खर जन्मेका बच्चामा प्रतिरक्षा प्रणाली बनिसकेको हुँदैन, उनीहरूले एन्टिबडी आफ्नो आमाबाट प्राप्त गर्छन्। नवजात शिशुहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएका केही केस फेला परेका छन्। उनीहरूलाई आमाकै पेटमा संक्रमण भयो वा जन्मिएपछि बाहिरी सम्पर्कका कारण भयो भन्नेबारेमा चिकित्साविद्हरू अनुसन्धानकै क्रममा छन्।
गर्भावस्थामा जाँच गर्न अस्पताल जाने कि नजाने?
गर्भावस्थामा कम्तीमा चारपटक फलोअपका लागि जानुपर्ने हुन्छ, कुनै समस्या परेमा त्योभन्दा बढी पनि जानुपर्ने हुन्छ। प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. ज्वाला थापाका अनुसार जो महिला आफ्नो फलोअप डेट नजिकिँदै छ, चिन्तित हुनुहुन्छ भने फोनबाटै चिकित्सकको परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। अहिले विभिन्न अस्पतालले हटलाइन उपलब्ध गराएका छन्।
चिकित्सकका अनुसार गर्भवती महिलाले घरमै आफ्नो रक्तचाप र मधुमेहको जाँच गर्न सक्छन्। साथै टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट चिकित्सकसँग सल्लाह–सुझाव लिन सक्छन्।
विभिन्न अस्पतालले संक्रमण घटाउने उपायहरू अपनाएका छन्। अस्पतालमा जोखिम फैलिन नदिन सम्पूर्ण मेडिकल स्टाफहरूलाई पनि स्क्रिनिङ गर्न जरुरी देखिन्छ। साथै कुरुवाहरू पनि सकेसम्म कम गर्नुपर्छ। न्यूयोर्कको केही अस्पतालमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै ‘नो भिजिटर पोलिसी’ अपनाइएको छ।
सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन अमेरिकाका अनुसार जो महिला कोरोना पोजिटिभ देखिएका छन्, तिनका बच्चाहरूलाई आइसोलट गरेर राख्न सुझाव दिइएको छ।
६ फिटको दूरीमा पर्दा लगाएर छुट्टै राख्न सकिन्छ आमा र शिशुलाई। हात राम्ररी धुने, पञ्जा तथा मास्क लगाएर आमाले शिशुलाई स्तनपान तथा स्याहार गराउन सक्छिन्।
स्तनपान गराउँदा भाइरस सरेको भन्ने तथ्यांक अहिलेसम्म रहेको छैन तर पनि केही सावधानी भने अपनाउन जरुरी देखिन्छ। एन्टिबडी प्रोटेक्सनका लागि पनि शिशुलाई स्तनपान गराउनुपर्छ।
गर्भावस्थाका बेला महिलाको शरीरमा निकै परिवर्तन देखा परिरहेको हुन्छ। आफूलाई संक्रमण भएको हो कि भन्ने आशंकासमेत लाग्न सक्छ। त्यसैले शारीरिक र मानसिक रुपमा आफूलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ।
केही शंका वा डर लागेमा टेलिफोनमार्फत चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ। त्यसका अलावा हात सफा राख्ने, सामाजिक दूरी र व्यक्तिगत दूरी कायम राख्ने गर्नुपर्छ। त्यस्तै नियमित रुपमा चिकित्सकको सम्पर्कमा रहिरहन पनि अति आवश्यक छ।
सरकारले संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गरेको छ। त्यसैले केही आवश्यक सामान घरका सदस्यबाटै मगाउनुपर्छ। आफू बाहिरी वातावरणको सम्पर्कमा आउनु हुँदैन।
प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सैयदका अनुसार सरकारले वडा–वडामा गर्भवतीहरूलाई अस्पताल जान सहज व्यवस्था बनाइदिन आवश्यक छ।
घरबाट अस्पताल लैजान सक्नेसम्मका सुविधा दिए उनीहरूलाई केही सहज हुने उनी बताउँछन्।
गर्भवती महिलाले कस्तो सावधानी अपनाउने? यस्तो छ चिकित्सकको सल्लाह
पटक–पटक साबुन पानीले हात धुने र बिरामी व्यक्तिसँगको सम्पर्कबाट टाढा रहने।
हाच्छिउँ गर्दा टिस्यु पेपरले मुख छोप्ने।
आफ्नो वरिपरिको वातावरण नियमित सफा गर्ने।
कामकाजी महिलाले घरबाटै काम गर्ने।
प्रशस्त मात्रामा पानी खाने।
पौस्टिक आहारविहार खाने।
महामारी नसकिँदासम्म बालबच्चालाई बाहिर समाजमा ननिकाल्ने। भर्खर जन्मेका बच्चालाई धेरैले छुने तथा बोक्न खोज्ने हुनाले संक्रमणको सम्भावना हुन्छ।
सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने।
फलोअपको समयमा इमरजेन्सी नपर्दासम्म फोनबाट परामर्श लिने। अत्यावश्यकबाहेक अस्पताल नजाने।
प्रकाशित भएको : April 2nd, 2020
काठमाडौ लगायत बिभिन्न जिल्लामा भयानक हुरिबतास,व्यापक क्षती
१४ जिल्लाका विद्यार्थीलाई स्कुल नजान सरकारको आग्रह
एकैदिन दुई लाखभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण